IPlywood yeeCampervans kunye neeKharavani
I-Birch Plywood epheleleyo
I-LVL yeCore Core
Uyintoni umahluko phakathi kweplanga yamaplanga kunye nolwakhiwo lwamaplanga?
Iglu Line plywood yolwandle inohlobo olusisigxina I-phenolic bond I-plywood yolwakhiwo inehlobo olusisigxina I-phenolic bond Timber Species plywood yolwandle Ingenziwa kumthi okhethwe kubuninzi bayo, ukugoba amandla, ukukhanya, ukugqiba umphezulu weempawu kunye nokuchasana nefuthe ...
I-Plywood yoLwandle lwaseLwandle-iPlywood engenamanzi
I-HW Marine Grade Plywood ithathwa njengenye yeentlobo ezifanelekileyo zeplywood. Yenziwe nge-firgou foug, iyenza ilula kakhulu kodwa yomelele kwaye yomelele. I-Plywood yoLwandle lwaseMarine ifaka i-glue engenamanzi yokubamba iiplies kunye. Ngamaplanga Marine isebenzisa amazwe Finnish manzi ...
I-HW PINE CDX ENGEKHO NGOKWAKHIWO KWIBAKALA LEBALA
IPine yethu ye-Pine CDX engeyiyo eyakhiweyo eyenziwe ngamaplanga yenziwa kwizityalo zepine ezigqwesileyo (umthombo ovuselelekayo) e-China, kusetyenziswa umgangatho wepine veneer kumanqanaba amabini akhethekileyo "C" kunye no "D". "C" grade veneer ithobela "C" Umgangatho we-veneer we-Australia. (Isandisiwe yagcwaliswa) Akukho ...
Uyikhetha njani i-Plywood yokulinganisa iKharavani
Iplywood ihlala idunyiswa ngenxa yokusebenza kwayo kunye nokukwazi ukuziqhelanisa neendlela ezahlukeneyo zokusebenzisa. Enye yezona zinto zixhaphakileyo ngabantu abaninzi abanokucinga ngazo xa besiva igama elithi "plywood" yindawo efanelekileyo yokuhambahamba. Iplanga kuye kwaba lukhetho oluthandwa kakhulu kwimizi yeekharavani ze ...
Yintoni i-formaldehyde yasimahla esekwe kwipaneli? Uyikhetha njani ipaneli esekwe ngokusesikweni ye-formaldehyde?
Yintoni i-formaldehyde yasimahla esekwe kwipaneli? Uyikhetha njani ipaneli esekwe ngokusesikweni ye-formaldehyde? Ngenxa ingqalelo elandayo formaldehyde kunye nokhuselo lokusingqongileyo kwimarike, amashishini phambili kushishino ifanitshala wena baye ngokusesikweni formaldehyde simahla kunye nokusingqongileyo-friendly wo ...
Eyona Plywood ilungele iiCampervans kunye neeKharavani
ngomphathi ku 21-03-14
Ngelixa uninzi lwamashishini luye lwasokola kutsha nje ngenxa yezithintelo ezitsha malunga nokuhamba kunye neendibano zoluntu kukho indawo enye eqhubekile nokuchuma; Iikampu kunye neenkampu. Ngohambo lwamazwe aphesheya lusuka etafileni kwikamva elibonakalayo kunye noqoqosho lwasekhaya olungenathemba ...
I-PLYWOOD EBunjiweyo, UKUYIDIBANISA NEZAKHIWO ZENKQUBO
ngomphathi ku 21-03-02
Iimfuno zentengiso yekhaya yeemoto ziyafana nezo zeshishini lokuhamba ngeenqanawa; umxhasi uyijonga ikharavani okanye i-motorhome njengekhaya lakhe lesibini, yiyo loo nto kubalulekile ukuba unikeze umhombiso ofudumeleyo kunye nezinto ezintsha zangaphakathi ukufumana intuthuzelo efanelekileyo. Iplanga yokubumba yangaphakathi ivumela ...
IPlywood vs Particleboard: Yeyiphi engcono?
Ngokubanzi, uninzi lwabantu luya kugqiba ekubeni ukuba uphosa iplywood vs i-particleboard, eyangaphambili iya kuphumelela. I-Particleboard, nangona kunjalo, ayikho ngaphandle kweenzuzo zayo ngaphezu kweplywood. Makhe sijonge umahluko phakathi kweplywood kunye ne-particleboard, kwaye ufumane ukuba ngubani oya kuphumelela iplywood ...
Ukwahlula njani umgangatho weplywood?
La manqaku alandelayo kufuneka agqweswe ngexesha lokhetho: Kukho amacala amabini e-splint. Xa ukhetha, iplywood kufuneka ibe nokutya okuziinkozo okucacileyo, egudileyo nangaphambili egudileyo, engarhabaxa, kwaye ethe tyaba. Iplanga alinakuba naziphene zinjengomonakalo, ukungqubana, intsalela yezinambuzane, umngxunya wezikhonkwane, indawo edibeneyo, ...
I-1, ifilimu ejongene nefilimu ayikhaphukhaphu, iyamelana nokuhlaselwa ngumhlwa kunye namanzi, zidityaniswa ngokulula nezinye izinto kwaye kulula ukuzicoca nokusika. Ukunyanga ifilimu ejongene nemiphetho yeplywood ngepeyinti engenamanzi iyenza ukuba ibe namandla kakhulu emanzini kwaye inxibe. Ngenxa yokuqina kwayo ...
I-plywood yethu yefenitshala kunye noyilo inika ukusebenza kakuhle koomatshini, uzinzo oluhle kakhulu kunye nokulungelelaniswa okuhle kokuphela komhlaba ngepeyinti. Izinto eziluncedo ebusweni nasemqolo: I-veneer fancy ichazwa njenge "sheet elibhityileyo lomthi, ukusika okujikelezayo, ukusikwa, okanye is ...
Zithini izibonelelo ze-EV Thin Plywood yezinto zangaphakathi zeMoto?
Ubunjineli benziwe buhle | Recon EV buhle ngenxa ngamaplanga obhityileyo Iimpawu kunye eziluncedo: Veneers EV kwakhona igama yokuphamba phinda elaminethiweyo ngamaplanga elaminethiweyo, le yeyona ikharavani yethu yokuthengisa ibakala elingaphakathi, ifanitshala grade yeebhodi. Siya kucebisa ukuba usebenzise umthengi wepoplar cor ...
Igumbi 6-135, Jushan Road, Donghu Street, Pizhou City, Jiangsu kwiPhondo, China